Kubva kuBahamas nerudo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » Kubva kuBahamas nerudo
Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • Hurumende Nhau • nhau • Dhinda Zviziviso • Kutarisirwa • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
kubva kumabahamas nerudo
Kufamba neKushanya zviroto zviroto izvozvi. Nyika iri kugara pamba mazuva ano. Ndangariro dzekugara pamuchena jecha pamhenderekedzo yegungwa, kunyura mumvura inodziya yegirazi rekristaro, kushambira nenguruve uye kuve nerudo rwekudya yegungwa chikafu ndangariro dzeBahamas.
Kurota kwakadai kunofadza uye dzimwe nguva kunorwadzawo. Kana uchimuka mumba mako usingakwanise kufamba nyika, kurota nezveBahamas kunogona kurwadza.
Maererano ne UNWTO, rusununguko rwekufamba, kodzero dzekufamba, kana kodzero yekufamba ipfungwa yekodzero dzevanhu inosanganisira kodzero yevanhu yekufamba kubva kunzvimbo nenzvimbo mukati medunhu renyika uye kubuda munyika vodzokera kwairi.
VaBahamas vari kugadzirira kuzivisa COVID-19 nhoroondo. Zvitsuwa zveBahamas zviri kutogadzirira kutanga mushandirapamwe wegore rese mu tiye mwedzi waJune.
Mushandirapamwe uyu ndewekusimudzira madingindira ane chekuita nezverudo ayo achange achiumbwa se, "Kubva kuBahamas Nerudo".
“Chinonyanya kukosha ndechekuti tiungane pamwe chete. Iwe wanga uripo kwatiri uye kana dutu rapfuura isu tichava pano kwauri. "
Vhidhiyo yekutanga Kubva kuBahamas nerudo, yakangoburitswa:
Iyo Bahamas zvirokwazvo ndiyo inonakidza uye nerudo kuenda kuCaribbean.
Hapana imwe nzvimbo yekuenda inopa dzakasiyana siyana uye dzakasiyana seiyi nyika yechitsuwa mazana manomwe. Kunaka kweBahamas kwakachena uye marongero anoshamisa kubva kune epedyo kumahombekombe egungwa, chokoreti yakasarudzika uye kugadzira pefiyumu, kudzikama kwakadzikama kutumidza vashoma, zvinowanzoita kuti unzwe kudanana, Bahamas ndiyo nzvimbo inonakidza uye inodakadza muCaribbean.
Kwayaka: Bahamas Ministry of Tourism & Aviation